» Qaama jabina keenyaan malee, qaama dadhabbina keenyaan tokkoomuu hin qabnu (As principle our unity should be defined by our strength rather than our weakness) ---- Gadaa.com Oduu – News
Qaama jabina keenyaan malee, qaama dadhabbina keenyaan tokkoomuu hin qabnu (As principle our unity should be defined by our strength rather than our weakness)
Bitootessa/March 14, 2013 · Gadaa.com Camadaa Hundee irraa*
Tokkummaan siyaasaa yeroo hunda fuunduratti tarkaanfachuuf kan akeekkate ta’uu qaba. Qabsoon bilisdummaaf deemsifamu sochii warraaqsaati. Warraaqsi ammoo yeroo hunda yaada haaraa fi muldhata qabsoo gara fuula duraatti furgaasuun masaka. Qabsoon waarraaqsaa daandii jijjiramaa fi fedhii haarawan sansakama. Warraaqsi adeemsaa fi dadhabbina kaleessa ture irraa baratee, kallattii diina jilbeeffachiisuu fi qabsoo warraaqsaa honnee fi jabina itti horuun gaggeefama.
QBOs kanaan ala miti. Qabsoon Oromoon mirgaa fi bilisummaa isaa goonfachuuf taasisaa ture, bifa harawaan waltajjii haarawaa keessatti gaggeefamuu qaba. murnootii fi bittootiin Oromoo cunqursaa jalatti nu bulchaa jiran yeroo gara yerootti toftaa acuuccaa isaanii ammayyeessaa fi jabeeffachaa deemaa jiru. Qabsoon keenyas kanaan kan wal simu ta’uu qaba. Diinni Oromoo yeroo toftaa fi tarsiimoo bittaa isaa ammayyeessaa fi waltajjii yeroo wajjin jijjirachaa deemu, mooraan qabsoo Oromoos kallattii fi tarsiimoo qabsoo isaa ammayyeessaa fi jijjiraa deemuu qaba. Galii fi muldhata gaarii qabatanii, tarsimoo fi toftaa isaaf malu yoo maddisiisuu ykn baasuu dadhaban, qabsoon achi siquu irra, mooraan diinaa gabbachaa deema. Kanaaf toftaa fi tarsiimoo qabsoo keenyaaf malu hundatti dhimma bahuun murteessaa dha. seenaa qabsoo bilisummaaf addunyaa keessatti ta’aa ture irraa illee barachaa fi hubachaa deemuun gaarii dha. Seenaa qabsoo bilisummaa addunyaa keessa ture kan irraa barannu, akkuma isaan yeroo keessa turaniitti dhimma itti bahuuf ta’uu hin qabu.
Milkii fi injifannoon qabsoo bilisummaa biyyoota addaa addaa keessatti ture amalaa fi waltajjii mataa isaa qaba ture. Kan irraa barannu akkamitti waltajjii fi haala keessa turan wajjin qabsoo isaanii wal simsiisanii injifannoo goonfachuu danda’an? kan jedhu ta’uu qaba. Waltajjii fi haaloti kaleessa injifannoon nama gahe, waltajjii ammaa keessatti tarii qaama kufaatii ta’uu mala. Sababbiin isaa addunyaa fi waltajjiin yeroo sanaa fi amma keessa jirru hundeen jijjiramee jira. Amalli diina keenyaas akkasuma jijjiramee jira. cunqursaa fi garbummaan garuu bakkuma jira. kanaaf qabsoon keenya tarsimoo fi toftaa harawaan masakamuu qaba. Galiin qabsoo keenyaa bakkuma jira. innis garbummaa fi curqursaa hundeen of irraa buqqisuu dha. Galii kana qaqabuuf tarsimoo fi toftaa qabsoo akkamiitti dhimma bahuu qabna jennee kan kaleessa keessa dabarre, kan amma keessa jirruu fi egeree qabsoo keenyaa ka’umsa kan taasifate tarsimoo harawan masakamuun dirqama ta’a.
Ka’umsaaf eegan ammana jedhee gara mata duree barreefama kanaatti deebi’a. Mata duree kana akkan kaasu kan nataasise haala yeroo ammaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti deemaa jiru sirnaan hubachuu fi dhimma itti bahuun barbachisaa dha jedhee waantan yaaduuf. Yeroo dheeraa fi yeroo ammaas gaaffiin bilbiltuu taatee, ummataaa fi qabsa’ota biraa dhagaamaa jiru dhimma tokkummaa qabsoo Oromoo ti. Dhugaa dubbachuuf tokkummaa dhabuun keenya mooraa qabsoo Oromoo eddu miidhee jira. ummati Oromoos ta’ee qabsa’oti Oromoo yeroo hunda tokkummaan akka mooraa qabsoo Oromoo keessatti dagaagu barbaadu. Namni tokkummaa hin faarsine hin jiru. Qaamni tokkummaaf rakkoo ta’es, kan tokkummaan dhugaa jiraachuu qaba jedhus, jecha tokkummaa jedhu kana wal qixa faarsu. Asirratti garuu waanti maqaa tokkummaan aguugamuu hin qabne, gaaffileen eddu ka’anii deebii yoo argatan tokkummaan dhugaan dhalachuu ykn dhugoomuu danda’a. tokkummaa akkamiitu nu barbaachisa? … Tokkummaa namootaa? Tokkummaa ilaalcha siyaasaa? Tokkummaa jibbiinsaa? Tokkummaa qaama jabinaa? Tokkummaa qaama dadhabbinaa? Tokkummaa Oromoon Oromoo biraa mo’achuu? Tokkummaa fuulduratti tarkaanfachuu? Tokkummaa duubatti deebi’uu? Tokkummaa tarsiimoo? Tokkummaa tooftaa? …. fi kkf kaasanii ilaaluun ni danda’ama. Kanaaf waanta tokkummaa jedhameef tokkummaan hunduu qabsoo fuula duratti tarkaanfachiisa jechuu miti.
Tokkummaan qabsoo tokkummaa sochii ta’uu qaba. Tokkummaan sochiif jecha uumamu injifannootti nama geessa. Tokkummaan dhaabbachuuf ykn taa’uuf taasifamu qabsoo quucarsuun ala fayidaa tokko iyyuu irraa hin eegamu. Oromoon yeroo mammaaku “Bishaan ciisu, Bishaan yaa’utu dammaqsa” jedha. Mammaaksi kun dhaamsa guddaa of keessaa qaba. Bishaan waanuma bishaan ta’eef yoo walitti makame sochii hin dhalchu. Bishaan ciisu yoo bishaan ciisu kan biraa wajjin walitti makame, bakka ciisichaa babaldhisuun ala, socho’ee danbalii uumuu hin danda’u. Kanaaf bishaan ciisu yoo bishaan yaa’u itti dabalame ni dammaksa. Sochii uumee akka yaa’u taasisa. Karaa biraatiin bishaan yaa’u, lamaa fi isaa ol yoo walitti dabalame galaana ta’ee didicha. Kanaaf mammaksi Oromoo bishaan yaa’u bishaan ciisu dammaqsa jedhu kun qabsoo keenyaaf dhaamsa guddaa qaba. tokkummaan mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamuu qabu jecha Oromoo kanaan kan wal simu ta’uu qaba. Faallaa mammaksa Oromoo tokkuummaa uumuuf yaalii gochuun bakka ciisichaa babaldhisuun ala fayidaa tokko iyyuu hin qabu.
Ija kanaan qabsoo keenyaa fi tokkummaa mooraa Oromoo keessatti uumamuu qabu xiinxallee ilaaluu dha. QBO sochii warraaqsaati eega jennee, tokkummaa sochii dhalchu ykn uumu tolfachuu qabna. Tokkummaan sochii qabsoo Oromoo gara fuula duraatti hin tarkaanfachiifne fala hin qabu. Tokkummaa yeroo jennu, maqaa isaatti dhimma bahuun ala, tokkummaa booda fayidaa inni qabsoo Oromoof fiduuf deemu wajjin ilaaluu nu gaafata.
Qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessuu keessatti dhaabbileen siyaasaa maqaa gara garaa qaban qooda isaanii gumaachaa jiru. Dhaabbileen siyaasaa kun tokkummaa uummachuun eddu barbaachisaa dha. tokkummaan kun garuu sochii qabsoo Oromoo shaffisiisuuf malee tokkummaa wal qabatanii taa’uuf ta’uu hin qabu. masakaani (principle) tokkummaa, qaama jabinaa keenya wajjin ta’uu qaba malee, qaama laafinaa keenya wajjin bifa kamiinuu tokkummaaf dhama’uu hin qabnu. (We should unify by our strength rather than our weaknesses) Fuuldura tarkaanfachuuf ykn socho’uuf malee, wajjin taa’uuf ykn duubatti deebi’uuf ta’uu hin qabu. Walqabatanii ciisuuf tokkummaadha yoo jenne QBO fayidaa hin qabu. kun tokkummaa qabsoo otoo hin taane, tokkummaa namoota dhuunfaa ti.
Dhaabillee siyaasaa Oromoo keessaa maqaa guddaa fi ga’ee muldhataa taphachaa kan turee fi kan jiru ABO dha. ABO angafoota dhaabbilee siyaasaa ti. Waanta eddu keessa darbee jira. qabsoo keessa darbe irraa muuxannoo fi barumsa guddaatu jira. ABOn eega dhalatee addunyaa keenya keessatti jijjiramni siyaasaa lamatu jira. innis bara ABO qabsoo jalqabee fi amma kufaatii Dargiitti siyaasi addunyaa keenyaa mooraa lama ture (mooraa warra dhihaa fi lixaa). Tarsiimoo fi toftaan qabsoon waltajjii yeroo sanaa keessatti gaggeefamaa ture, kan haala yeroo sanaan wal simuu qabuu dha. kanatti dhimma bahuu dandeenyee jirraa? Gaaffiin jedhu ka’uu mala. Kun nuuf haa turu. Jijjiramni addunyaa inni lammaffaan ammoo mooraan siyaasaa bakka lama ture, mo’annaa warra dhihaan gara mooraa tokkuutti dhuunfatamuu isaa ti. Kun ta’uun isaa adeemsa qabsoo biyya kamuu keessatti jijjirama tarsimoo fi toftaa dhalchee jira. Qabsoon ABOn durfamu, jijjirama addunyaan ala, tasa gaggeefamuu hin danda’u. kanaaf ABOn tarsiimoo jijjirama addunyaa keessatti muldhateef kan wal simu tarsiimoo fi toftaa qabsoo isaa wal fudhachiisee jiraa yoo jenne kunis gaaffii biraa ti. Kun dadhabbina qabsoon keenyaa fi ABOn qabu keessaa isa ijoo dha.
Kun jijjirama haala addunyaa ti. Jijjirama haala addunyaa wajjin kan wal simu diinni keenyas jijjirama mataa isaa godhee jira. diinni nuti yeroo ammaa (Wayyaanee) waldhaansoo qabaanii jirru, sirna H/sillaasee fi Dargii beeknu wajjin yoo ilaalle tarsiimoo fi toftaan isaan ordofan, hundeen jijjirama qaba. Kan jijjirama hin qabne garbummaa fi acuuccaa isaan Oromoo irratti fe’anii dha. kanaaf diinni keenya yeroo tarsimoo acuuccaa isaa jijjiru ABOnis kan isaaf malu tarsiimoo qabaachuu qaba.
Haalli diina keenyaa fi addunyaa yeroo jijjiramee jirutti tarsiimoon qabsoo keenyaa kanuma kaleessa ittiin dhaadachaa turre yoo ta’e, diinni akka nutuffatu taasisa. Beekumsaan qabsoo masakuu (hoogganuu) irra, yaada haaraa fi tarkaanfataa wajjin walitti bu’aa deemna. Kun ammoo diina keenyaaf carraa baldhaa uumee jira. tokkummaan nuti mooraa qabsoo keessatti uummachuu qabnu, tokkummaa haala addunyaa fi diina hubate ta’uu qaba. kanaan ala tokkummaa diina bara H/sillaasee beeknu sana uummachuuf yaalii goona taanan, duubatti deebi’uuf ykn sochii qabsoon gaafatu dhiifnee wajjin ciisuuf ta’a. Tokkummaan akkanaa ABOf fayida tokko iyyuu hin qabu. tokkummaan ABOf barbaachisu tokkummaa sochii ti. Tokkummaan ABOn barbaadu tokkummaa haala diinaa fi addunyaa hubate ta’uu qaba. waltajjii keessa jirru kan dagatee, tokkummaan uumamu, bishaan ciisutti bishaan ciisu dabaluun ala QBOf fayidaa hin qabu.
ABOn daandii jijjiramaa qabachuun dirqama. Siyaasni ijjiramaan hin masakamne (hin hoogganamne) bakkuma dhaabatuu sirba. Tarii gara duubatti deebi’uu dhalcha. ABO keessatti jijjiramni guddina siyaasa Oromoo fi addunyaa wajjin wal simu deemuun dirqama yeroo ti. Dhalooti Oromoo amma jiru kun qabsoo gaggeessuuf dirqama bara bittaa H/silaasee keessa dhalachuu hin qabu. Hadhaa garbummaa fi acuuccaa isarra jiru waltajjii keessa jiru irraa hubachuuf dandeetti itti qaba. Dhalooti amma jiru ammoo toftaa fi tarsiimoo qabsoo isaaf malu baafchuuf dirqama dhaloota sirnoota durii beekan ykn keessa turan ta’uu hin qabu. karaa biraatiin eeyyama isaaniis gaafachuu hin qabu. sababbiin isaa waltajjiin kaleessaa fi ammaa garaa garummaa hundee qaba. dhalooti kaleessaa dhaloota amma jiru, eebbisuutu isa irraa eegama. Kanaan ala dhaloota harawaa Oromoo dhaloota kaleessaa duwwaan masakamuu qaba ilaalchi jedhu hundeen jijjiramuu qaba. ABOnis kana fudhatee maxxanfachuun dirqama isaa ti. Tokkummaan ABO keessatti uumamuu qabus tokkummaa dhaloota haraawaa ta’uu qaba. dhaloota harawaa fudhachuu diddaaf jecha, tokkummaa qaama dadhabbinaa uumuuf dhama’uun xiqqoo illee achi nama hin butu. Tokkummaan ABOn uummachuu qabu tokkummaa qaama jabina isaa ta’uu qaba. Bishaan yaa’u, bishaan ciisu wajjin ykn bishaan yaa’u, bishaan yaa’u wajjin ta’uu qaba. bishaan ciisutti bishaan ciisu dabaluun dachee irra ciisan baldhisuun ala fayidaa hin qabu.
4 Comments	Qanquree said,
” ABO kessati jijjiramni siyaasa guddaa oromiyaa fi adunyaa keesati wajjiin wal simu deemun dirqama yerooti”. Kun jecha ODF warra ofiin jedhaniiti. Garuu jijjiramni oromiyaa s ta`e adunyaa kesati hara hindhufne. Oromoon cabuun, qabsoon eegaluun, warregamni kafalamuun kun hundi jijjirama. the world is always in constant changing. then what makes change special and all deaftist section is crying foul. Change for those group is abandaning national struggle and surrendering . Then wine and dine with enemy while the nation is under colinial rule.The group could do itself but the nationalists and the oromoo mass shall not surrender.No nation on this earth has got its freedom by begging.
March 14, 2013 @ 5:52 pm
tole, yaadii kee gaariidha, yeero tokkuma jennu,oromon humna isa, beekumsa isa, fi qabeenya isa waitti fide waliin haa qabsa’u jechudha, kun ammo yoo qabsichi gosa fedhen deemes kara kuta hin-qabneedha. yoo akka isin jettaan yaada siyasa yeero hammatess yoo kayyodhuma ganaman deemes tokkumman barbachisadha. Ani haalli adunya jijirame yeero jennu, haalli inni ittiin mirga keenya akka nuti hin-gaafannen nu-dura dhabbattu hin-beeku.eyye, qabsoon hidhanno haala gaafa jalqabamen adeemu dhiisu mala, haala yeerotiin sirra’un dirqiidha, sunu toofta lola keessatti guyya-guyyanu xinxalamu qaba.
har’a tutuma tokkumman jedhameyyu, hidda hin-godhatiin, gosa tokkumma irraatti xiyyeeffachun garu, utuma tokkumman hawwama ture firi hin-godhatiin, hadha fi mi’a firi argamu irraatti yeero keenya ballessu caala mee qabsa’ota wal-taane qabsoofna jedhan kanaaf carra laanne yaaddo isa isin jettaan kanatti waluman haa deebinu.
Bishaan yaa jiru malee bishaan ciisa jiru itti waanti dabalame hin-jiru, yoo nuti ciisa jirra ta’en ala.
Horii Buli Obbo Camadaa. haqa afa jiruu fi dhugaa muldhatu barreefamaan akka gaariitti ibsite. qabsoon fuunduratti socho’uu malee boodatti tarkaanfatu irraa hin jifannoon hin eegamu. maal qaba warri waa baranne jedhan kun rakkoo qabsoon keenya keessa jirtu ilaalanii dogongora amma yoona ture irraa baratanii yaada namaas keessumeessanii akkam gaarii ture. malumaafuu warra waa hubatuu fi baratu nu haa godhu.
The modern said,
It is great anlyess you Nell it brother, we need a leader that can create
Vision, which prompte a change. Our past leader instate of going forwrd to make difference they
Create obsticle with in organization in order to stay on power, Even-those they are not leading any nation.